फेरि लम्बियो एक साता हेर्नुहोस कहिले सम्म नि’षेधाज्ञा ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/फेरि लम्बियो एक साता हेर्नुहोस कहिले सम्म नि’षेधाज्ञा !
फेरि लम्बियो एक साता हेर्नुहोस कहिले सम्म नि’षेधाज्ञा !
काठमाडौँ। फेरि लम्बियो एक साता हेर्नुहोस कहिले सम्म निषेधाज्ञा । को’रोना स’ङ्क्रमण वढ्दै गएपछि साउन ३० गते मध्यरात देखि भरतपुर महानगरपालिका र साउन ३२ गते देखि जिल्लाका अन्य पाँच स्थानीय तहमा नि’षेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । स्थानीय तहको सिफारीसमा गरिएको निषेधाज्ञा आज मध्यराती सकिदै छ । नि’षेधाज्ञाको समय सकिन लाग्दा एक साताका लागि निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नि’षेधाज्ञा भदौ १२ गते मध्यरात सम्म लागु हुने छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले थप एक साताका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यस अघि माडी नगरपालिका बाहेक ६ वटा स्थानीय तहमा मात्र निषेधाज्ञा जारी गरिएकोमा आज राती १२ बजेबाट माडी सहित पुरै जिल्लामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
भरतपुर महानगरसँगै रत्ननगर, कालिका, खैरहनी, राप्ती, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । जिल्लामा अहिले कोरोना स’ङ्क्रमित ३ सय ३ पुगेका छन् जसमा महानगरमा १६८, राप्ती नगरपालिका ६५, खैरहनी नगरपालिका १२, कालिका नगरपालिका ५, रत्ननगर नगरपालिका ११, माडी नगरपालिका ४१ र ईच्छाकामना गाउँपालिकामा १ जनामा कोरोना स’ङ्क्रमण देखिएको छ । हाललसम्म तीन जनाको मृ’त्यु भएको छ ।